Faritra Menabe : Mba tsy ho faritra mena eo amin’ny resaka tsy fandriampahalemana intsony
vendredi, 09 juillet 2021 19:37
Tonga tao Morondava, nihaona tamin'ireo tompon'andraikim-panjakana ao Menabe ny Jeneraly Rakotonirina Richard, Minisitry ny Fiarovam-pirenena, androany zoma 09 jolay, nijery ifotony ny toe-draharaha eo amin'ny lafiny fandriampahalemana any amin'iny Faritra iny.
Faritra mena eo amin’ny resaka tsy fandriampahalemana ny Faritra Menabe. Hatsaraina izany amin’ny alalan’ny fametrahana Faritany fiarovana sy fampandriana fahalemana, izay narahina fampahafantarana ny faritra vaovaon'ny Tafika.
Io no antodian’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena tao Morondava raha tombony ho an’ny faritra Menabe ny fananana ireo fotodrafitr'asa toy ny BOA ao Ankilizato, CSAO Malaimbandy sy Andimaky ary ny BRS ao Miandrivazo.
Nampahafantariny ampahibemaso tamin’izao diany izao ny Kaomandin'ny Fari-piarovana sy Fandriampahalemana (ZDS) Tsiribihina, ny Jeneraly Andriambao Ramisa, ary nanazava ny fandrosoan'ny fanitsian-drafitra ankehitriny.
Faritra faharoa notsidihin’ny minisitry ny Fiarovam -pirenena ny Faritra Menabe taorian’ny tany DIANA.